प्रकाश सुवेदीलाई स्वस्तीमाको जवाफ : बरु बुढा बोकेर हिडिन्छ तिम्रो अन्तर्वाता दिन आइदैन - टि. एल. एन पोस्ट
Home फिल्म सेलिब्रेटी प्रकाश सुवेदीलाई स्वस्तीमाको जवाफ : बरु बुढा बोकेर हिडिन्छ तिम्रो अन्तर्वाता दिन...
प्रकाश सुवेदीलाई स्वस्तीमाको जवाफ : बरु बुढा बोकेर हिडिन्छ तिम्रो अन्तर्वाता दिन आइदैन
काठमाडौं । सञ्चारकर्मी प्रकाश सुवेदीको रजतपट विभिन्न कारण सहित विवादमा छाइ रहन्छ । पछिल्लो पटक भने यसमा नायिका स्वस्तिमा खड्का तानिएकी छिन् । रजतपत कार्यक्रमको पछिल्लो श्रृङ्खलामा प्रस्तोताले नेपाली कलाकारहरु कामविहिन भएको कुरा उठाउँदै स्वस्तिमा खड्कालाई इंगित गर्दै अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘कुनै समय थियो हाम्रा कलाकारहरुलाई भ्याईनभ्याई हुन्थ्यो, अलि चलेका कलाकारलाई लिएर फिल्म बनाउन खोज्दा पनि एक वर्ष पछि गएर सोच्नुपर्ने स्थिती थियो, त्यति व्यस्त थिए कलाकार । डेट दिनै गाह्रो । अहिले त कामधाम छैन, बुढो बोक्यो, हिँड्यो ।’ प्रकाशको यस्तो अभिव्यक्तिपछि नायिका स्वस्तिमाले श्रीमान् निश्चल बस्नेतलाई बोकेको छोटो भिडियो राखिएको छ । यसमा स्वस्तिमाले प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । आफ्नो आधिकारिक फेस बुकमा उनले बिहिबार राती लेखेकी छिन्, ‘बरु बुढा बोकेर हिँडिन्छ तर जति फोन गरे पनि तिम्रोमा अन्तर्वार्ता दिन आइन्नँ । रजतपत’ उनले थपेकी छिन्, ‘फोन नउठाएर सारै रिसाउनु भाको रैछ । सरी ल !!’ यस्तै स्वस्तिमाका श्रीमान् निश्चल बस्नेतले पनि यसबारे फेसबुकमा स्टेटस लेखेका छन् । उनी भन्छन्, ‘‘बरु बुढा बोकेर हिँडिन्छ तर जति फोन गरेपनि तिम्रोमा अन्तर्वार्ता दिन आइन्न ल, भन्छे मेरी बुढी त !’
रजतपट कार्यक्रममा प्रस्तोताले नेपाली चलचित्रका अभिनेत्रीहरुलाई लक्षित गर्दै विवादित टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । यसअघि अभिनेत्री पूजा शर्माको शारीरिक स्वरुपबारे उनले वि’वादित बयान दिएका थिए । आफूप्रति गरिएको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाउँदै पूजाले नेपाल चलचित्र कालकार संघ, महिला आयोग र प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिएकी थिइन् । चलचित्र सम्बन्धित सात पेशागत संघ संगठनले रजतपटमा सहभागी नहुन चलचित्रकर्मीहरुलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
Previous article​बझाङमा टिपर पल्टिदा दुई जनाको मृत्यु तीन जना घाइते
Next article​सानै उमेरमा विवाह गरेकि रक्षा श्रेष्ठका श्रीमान को हुन् ? गर्भवती भएपछि छोडिन सबै काम